Freins | May 2022
Tena > Freins
ny fomba fandatsahan-dra shimano freins
Ny fomba fandatsahan-dra shimano freins - vahaolana maharitra
Ahoana no fandatsahanao rà mandriaka Shimano irery? Ahoana ny fomba fampidirana freins Shimano Disc: esory ny kodiarana any aoriana. Esory ny pads frein. Ampidiro ny Bleed Block amin'ny alàlan'ny pin cotter na bolt. Ampifanaraho ny levera frein mba haavo ny haavony. Esory ny visy miendrika rà amin'ny alàlan'ny alim-borona 2.5 mm. Atsofohy amin'ny fantson'ny rà mandriaka Shimano ary avelao hiditra ao ny plunger.
Freins Trek disc - ny fomba hahatratrarana
Manana freins disc ve ny bisikileta Trek? Ny freins de rim nentim-paharazana dia safidy tsara foana, ary mbola misy amin'ny bisikileta Trek maro ihany izy ireo. Saingy androany, ny sehatra Trek rehetra dia manana safidy kapila kapila ihany koa. Ny freins disc amin'ny bisikilety dia mahasoa ny mpitaingina lalana rehetra, eny fa na dia ireo izay tsy mba diso lalana mihitsy aza amin'ny famolavolana milamina.
Freins Shimano 105 freins - mety vahaolana
Manana frein disc ve ny Shimano 105? Ny vaovao lehibe indrindra ho an'ny Shimano 105 dia ny fampidirana ny freins hidrolika miaraka amin'ireo endri-javatra voatokana ho an'i Shimano ho an'ny andian-tsarimihetsika. Ireo calipera BR-R7070 vaovao fisaka vaovao dia mifanaraka amin'ny pad ICE TECHNOLOGIES sy ny rotors SM-RT70 (ao anatin'izany ny habe 140mm vaovao) hanolotra ny vondrona Shimano 105 mahay indrindra.
frein karbonina trp
Frein karbonina Trp - vahaolana pragmatika
Tsara ve ny frein TRP? Izahay dia manome ny laharana TRP ho iray amin'ireo mpifaninana tsara indrindra amin'ny SRAM sy Shimano. Ny frein TRP Quadiem dia manana ny entana rehetra, manolotra modulasi sy hery mahatalanjona miaraka amin'ny lelam-pitotoana manjavozavo sy ergonomika.
mametaka brakes mivantana
Sram direct mount brakes - vahaolana amin'ireo olana
Tsara kokoa ve ny freins mivantana? Ny calipera mivantana dia tsara kokoa noho ny freins tokana tokana satria mafy be izy ireo. Niorina teo anelanelan'ny teboka roa fa tsy iray, dia tsy dia mora mihodina izy ireo, ka tsy dia very maina ny ezaka ataonao amin'ny levera. Noho ny fijoroany malalaka dia manolotra famafana kodiarana mendrika ihany koa izy ireo.
freins hidimarina shimano r785
Freins hidrano Shimano r785 - ny fomba fanamboarana
Ahoana no fandatsahanao rà mandeha amin'ny frein disc Shimano r785? Esory ny fonon'ny vovobony, avy eo fenoy ranon-tsiranoka ny syringe anao. Atsipazo arak'izay azo atao ny rivotra, apetaho eo amin'ny nonon-tsavona ny fantson-tànana ary afatory tsara amin'ny toerany. Azonao atao izao ny mampiasa lakile hex na zoro boaty hanokafana ny seranan-drà, mitandrina mba tsy hikapoka ny fantsona. Vonona handatsa-dra ianao izao.18. 2016.
frein disc uci
Freins Uci disc - ny fomba fanamboarana
Ara-dalàna ve ny freins disc? Ny UCI dia nanamafy tamin'ny fanambarana an-gazety omaly fa ny freins disc dia omena alàlana hampiasa amin'ny hazakaza-dàlana (sy BMX) hatramin'ny 1 Jolay, aorian'ny taona maro sy fiandohana nahita azy ireo nankatoavina tamin'ny fotoam-pitsarana, voarara indray, ary avy eo nankatoavina indray. 22. 2018.
freins tsy mandeha amin'ny toetr'andro mangatsiaka
Ny freins tsy mandeha amin'ny toetr'andro mangatsiaka - boky torolalana feno
Fa maninona no tsy mandeha ny freins-ko rehefa mangatsiaka? Ny conduction dia afaka manala ny diaphragm booster sy / na manamarina valva ka mamorona pedal frein mafy. Ireo fiara izay naterina tamin'ny toetrandro mangatsiaka ary notehirizina tao anaty garazy nandritra ny alina dia mety hiaina ireo soritr'aretina ireo. Fomba iray hafa hamahana io olana io ny famelana ny motera alohan'ny hanainganana azy.
freins hydrolika mazoto
Freins hydrolika mazoto - fanontaniana mahazatra
Tsara ve ny frein Avid? Didim-pitsarana farany: hazakazaka bisikileta no hampiasako ireo frein ireo. Izy ireo dia maivana amin'ny traikefa nahafinaritra mandritra ny tontolo andro amin'ny bisikileta an-tendrombohitra rehetra, na ampy handehanana mihodina amin'ny vodilanitra any Whistler mandra-pahatonga anao ho may kokoa noho ny pads anao. Ny fanovana lehibe, ny ergonomika ary ny estetika dia lasa fenitra.
freins lalana magura
Freins lalana Magura - ahoana no hamahana izany
Alemanina ve i Magura? KG, fantatra amin'ny anarana hoe Magura, dia orinasa alemana monina ao Bad Urach naorina tamin'ny 1893 izay mamokatra sy mizara vokatra sy serivisy bisikileta misy maotera, anisan'izany ny fampiatoana ny tsingerina sy ny frein, ny solomaso, ny fiarovan-doha, fonosana, kitapo ary akanjo.
freina ultegra hidina novakiny
Freins ultegra hydraulic freins - vahaolana maharitra
Ny freins Shimano Ultegra dia novonoina? SHIMANO ULTEGRA Hydraulic Disc Brake Rear Caliper.
Frein Deore xt - vahaolana azo ampiharina
Tsara ve ny frein Deore XT? Amin'ny ankapobeny. Ny freins Shimano XT farany dia tokony hanomezana fahafaham-po ny ankamaroan'ny mpitaingina lalana, na dia mety mila fanoloran-tena kely aza ireo mpankafy an'io tsipika io mba hankasitrahana ireo fanavaozana. Miaraka amin'ny fampisehoana azo ianteherana miampy fametrahana mora sy fikojakojana dia ny freins XT no mbola resy.
Frein fehezan-dalàna - valiny tsotra amin'ny fanontaniana
Tsara ve ny freins SRAM Code R? Ny SRAM Code R dia vaky lalana / enduro mahery, manome modulasi lehibe sy fiainana pad tsara, tsy misy fihenan-tsasatra sy fihenan'ny saina sasany amin'ny fifaninanana.6. 2018.
freins sram haavon'ny
Freins Sram haavon'ny - mitady vahaolana
Ny hidin-tsambon'ny ambaratonga SRAM ve dia mandeha ho azy? Ny Torolàlana dia frezy kapila hydraulic tsara tarehy; iray amin'ireo tsara indrindra eny an-tsena. Miaraka amin'ny freins Level-piston vaovao mifantoka amin'ny piston roa-piston, ny SRAM dia saika niverina tamin'ny toerana nisy azy teo alohan'ny TaperBore: Ny ankamaroan'ny freins disc hidiny dia mampiasa seranan-tsambo indray mandeha indray.
ny fomba fanitsiana frein shimano
Ahoana ny fanitsiana ny freins shimano - vahaolana azo ampiharina
Ahoana no fanitsiana ny freins hidrano Shimano?
ny fomba fanadiovana freins disk
Ahoana ny fomba fanadiovana ny freins disk - valiny tsotra amin'ny fanontaniana
Inona no azoko ampiasaina hanadiovana ny freins disc? 'Manoro savony sy rano malefaka izahay hanadiovana ny frein disc. Izany dia mba hialana amin'ny fahalotoan'ny pads sy ny rotor. Ny mpanadio freins sy ny spray hafa dia tsy ilaina. Aza mampiasa tsifotra voatetika hanadio ny freins fa mety hiteraka fivontosan'ny tombo-kase.22.06.2019
freins mount mivantana
Ny freins mivantana - ny fomba fiasa
Inona avy ireo freins mivantana? Ny freins Direct Mount amin'ny ankapobeny dia freins tsy misy mombamomba azy ary tsy mahazaka tarika izay mipetraka eo akaikin'ny fefy bisikileta na fork. Izy ireo dia miraikitra amin'ny alàlan'ny frame manokana sy ny havoana ka ny ankamaroan'ny bisikileta dia tsy afaka mampiasa calipers Direct Mount.11.08.2015